Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » NchNhr ụgbọ elu ọhụrụ nke Uganda: Ahịhịa?
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Abịa na menu ụgbọ elu Uganda n'oge adịghị anya?
N'ịbụ onye ihere na mmeghachi omume na-agbasa na soshal midia na-akpa ọchị na ndị Uganda bịara nkwupụta ahụ kpuchiri ekpuchi, ebe ọ na-abara onye njem ahụ mba mba, ụlọ ọrụ ụgbọ elu tụkwara aro ịgbakwunye. nri ime obodo Nsenene (grasshoppers nwere mpi ogologo oge) na menu ha maka ụgbọ elu mpaghara na nke mba ụwa.
Anyị amụtala ihe n'ihe merenụ. Ụfọdụ ndị ahịa anyị na-enwe mmasị na Nsenene," nkwupụta ụgbọ elu kwuru. "Anyị na-atụle ịgbakwunye Nsenene, nri nri Ugandan dị na mpaghara, na menu anyị maka ụgbọ elu mpaghara na mba ụwa na-arịọ arịrịọ. Mgbakwunye Nsenene a ga-eweta omenala Uganda na ụwa. Nkwagharị a ga-akwalite ahịa njem nlegharị anya yana ihe ndị mmadụ na-eri n'ụkpụrụ ahuhu na-aga n'ihu."
Ndị ụgbọ elu Uganda, dọrọ aka ná ntị megide nlọghachi omume dị otú ahụ n'ime ụgbọ ahụ, ịdọ aka ná ntị na ikpughe ndị njem n'ahụmahụ ahịa ahịa na-adịghị mma n'ime ụgbọ ahụ ga-eme ka ebupụ onye njem na-enweghị nleba anya ọzọ.
Onye njikwa mmekọrịta ọha na eze Uganda, Shakira Rahim, kwuru na N'ajụjụ ọnụ televishọn na NTV na ụlọ ọrụ ụgbọ elu ga-ajụ onye njem ahụ ajụjụ ma ọ laghachiri iziga ndị njem na-eme onwe ha n'ụzọ na-adịghị mma n'ụgbọ ahụ. Ọ gbachitere ndị ọrụ ụgbọ mmiri o kwuru na ha nwara igbochi nwa amadi ahụ inye ohere maka ibuga ndị njem. Ị nweghị ike ime nke ahụ na ụgbọ elu mba ụwa, n'ihi na enwere ndị njem nọ n'ụgbọ ahụ ga-aga n'ihu njem ha ebe ọzọ. A naghị anabata nri nke na-agafebeghị ọkọlọtọ anyị na nlele mma n'ụgbọ mmiri; nke ahụ bụ okwu ahụ, nke ahụ bụkwa ọkọlọtọ,” Rahim kwuru.
N’ikwu banyere otu ihe ahụ, onye njikwa ihe gbasara ọha na eze nke Uganda Civil Aviation Authority, Vianney Lugya, kwuru, sị: “Ahịhịa esoghị na ndepụta nke ihe ndị a machibidoro iwu. N'ihi ya, ọ bụghị ihe nchebe ka ụkpara na-abanye n'ụgbọelu. Naanị ihe a ga-enyocha bụ ka onye njem ahụ si mee onwe ya n'ụgbọelu. Naanị ọnọdụ a na-enyocha bụ ma ọ bụrụ na mba ebe ụgbọ elu na-aga n'ihu machibido ihe ahụ. "
Onye minista na-ahụ maka ọrụ na ụgbọ njem, General Katumba Wamala, onye ụlọ ọrụ ụgbọ elu dara n'okpuru ebe ya, ewepụghị okwu ya mgbe ọ na-apịa ụtarị ahụ site n'inye iwu ntaramahụhụ maka ndị ọrụ nọ n'ọrụ n'oge ihe a mere. Wamala tweeted: "Banyere vidiyo na-agbagharị na mgbasa ozi ọha mmadụ nke onye na-ere Nsenene n'ime ụgbọ elu @UG_Airlines, agwawo m ndị isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu ka ha mee ihe megide ndị ọrụ na-elekọta mgbe ihe a mere." General Wamala na-elekọta ụlọ ọrụ ụgbọ elu kamgbe a họpụtara ya na 2019, na ihe ikpeazụ ọ ga-anabata bụ ntụpọ dị n'ụgbọelu ahụ.
eTN amụtala kemgbe Paul Mubiru, onye ahịa a na-aza ajụjụ, n'agbanyeghị na ọ rịọrọ mgbaghara n'ihu ọha, ejidere ndị ọrụ mbata na ọpụpụ na ngalaba mbata na ọdụ ụgbọ elu Entebbe International malitere n'ọrụ mgbe ọ si Dubai lọta taa, Nọvemba 19, 2021 na 11. :49 nke. A kpọchiri ya n'ọdụ ndị uwe ojii ọdụ ụgbọ elu ma na-eche ebubo ebubo. Kampala City Traders Association (KACITA), nke o so na ya, atụbawokwa anya n'okwu a site n'ikwe nkwa na ha ga-ata Mubiru bụkwa onye na-azụrụ ihe n'aha ọtụtụ ndị ahịa obodo.
Maka ụfọdụ, Mubiru nwere ike ịhụ dị ka dike na-ekpe ikpe site na ndị njem - tumadi ndị ahịa Uganda na-aga n'ụzọ Dubai maka ahia - gụnyere ndị njem China di na nwunye bụ ndị sonyere na ịzụrụ nri. Nye ndị ọzọ, ọ bụ ajọ mmadụ kwesịrị nlelị maka imenye mba ahụ ihere. Nye ha, omume ndị dị otú ahụ bụ onyeisi oche nke ndị njem n'ime bọs ọha bụ́ ebe ha na-ezi ozi ọma na ịzụrụ ihe
site na mmanya dị nro, ọgwụgwọ maka ike, ọbara mgbali elu, na ọrịa shuga niile n'otu n'otu, ndị dọkịta ọdịnala ma ọ bụ ndị na-ekwupụta onwe ha na-enyefekarị na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla.
Akụkọ ihe mere eme nwere ike igosi Mubiru n'ụta ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ụgbọ elu emee ihe ọma na nkwa ha ịgbakwunye ndị nkatọ ndị ahụ na-atọ ụtọ na ọpụrụiche ụgbọ elu ha.